ANKOLAFY RAVALOMANANA : Handray anjara amin’ny diniky ny FFKM – MyDago.com aime Madagascar
ANKOLAFY RAVALOMANANA : Handray anjara amin’ny diniky ny FFKM
Hitohy amin’ny 03 May izao eny amin’ny CCI Ivato ny dinika savaranonando karakarain’ny FFKM. Araka ny fantatra dia handray anjara amin’izany ireo antoko politika toy ny Mfm, Teza, Psd, Amf 3fm ary ny antoko Zanak’I Dada. Handray anjara ihany koa ny movansy Ravalomanana tarihin’ny minisitry ny fambolena Ravatomanga Roland sy ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana. Ny filoha Ravalomanana Marc izay filoha mpitarika ny movansy Ravalomanana dia efa nampiseho hatrany ny fahavononany amin’ny fifampidinihana tamin’ireo fifanarahana rehetra natao teto amin’ny firenena na tany ivelany. Nampadefitra ny hambom-po politikany mihitsy azy ny filoha Ravalomanana Marc ka nanaraka ny toromarika nomen’ny mpanelanelana, ary tsy nivadika tamin’ny Sonia izay nataony. Noho izany dia tsy sakana amin’ny famahana ny olana ny tenany.Ny mpitondra fat hatrany no tsy nanatanteraka ny fifanarahana fa nitady hirika tsy hahavitany. Nampiasainy ho fitaovana ho amin’izany ireo manamboninahitra vitsivitsy mitana ny fibaikoana ny tafika, ka zary lasa manao fanambarana politika. Ny tondrozotra izay nifanarahan’ireo an-kolafin-kery politika eto amin’ny firenena aza dia tsy notanterahin’ny fat amin’ny antsipiriany. Ireo izay mety aminy ihany no hampihariny kanefa efa lasa lalàna velona mitondra ny firenena ny tondrozotra.
TSY HANDRAY NY « REQUISITION » SADY TSY HANDRAY ANJARA AMIN’NY FANADINAM-PANJAKANA REHETRA NY SEMPAMA
6 pensées sur “ANKOLAFY RAVALOMANANA : Handray anjara amin’ny diniky ny FFKM”
1 mai 2013 à 19 h 03 min
F’ angaha dada tsy mba mila izany dinika izany???
tsisy resaka mihintsy fa zara aza voatampina t@’ilay Neny NILATSAKA an???
Efa harakay dHolo ny tetik ratsy rehetra e!!!AHILIKA MAFY MIHINTSY DADA MBA HANOMEZANA
VAHANA NY FOZA AN!!!TOHIZO eeeeeeeeeee fitao, fahano lalitra foana ny Gasy eeeeeee
Somary adikako kely eto ny voasoratra etsy ambony :
« Araka ny fantatra dia handray anjara amin’izany (dinika FFKM) ny antoko politika toy ny Mfm, Teza, Psd, Amf 3 fm ary ny antoko Zanak’i Dada. Handray anjara ihany koa ny « movansy Ravalomanana tarihin’ny ministry ny fambolena Roland Ravatomanga sy ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana ».
Miala tsiny raha manakiana kely an’izay voasoratrao io r’Ingahy Solo Razafy, fa misy zavatra tsy dia mety loatra ao. Mino aho, ary enga anie fa tsy ianao no tompon’andraikitra amin’ilay izy !
Fa ahoana indray ity hoe Movansy Ravalomanana tarihin’i Roland Ravatomanga ity ? Nisy « epizaody » tsy arakay angaha ? Tsy Ingahy Rakotoarivelo ve atramin’izao no mpitarika an’io Movansa Ravalomanana io ?
Ary ny Mfm, teza sns… anie dia AO ANATIN’IO MOVANSA IO KOA ê ! Amiko dia tsy tokony atokana ry zareo satria izay tapaky ao anatin’ny ny Movansa no arahan’ny rehetra !
Raha misy hevitra tapaka ary sonia tokony ho atao, dia ny Filoha Ravalomanana amin’izay no tokony hanao azy, fa tsy Ingahy Rakotoarivelo intsony. Efa hita izao ny fahavoazana nateriky ny fanaovan-tsonia an’ilay Tondrozotra !!
Ary ahoana koa ity antoko Zanak’i Dada ity ? Na dia nisy resaka momban’io aza, angaha efa tafatsangana izy io, ary iza no Filohany ary aiza ny foibeny ? Iza avy no mpikambana ao ?
Mba miangavy ê ! Aza dia atao re izay hahavaky saina ny vahoaka ry zareo â ! Mba lasa ihany ny saina !
Tsaroana etoana ny voalazan’Ingahy Manoela : « Soa kenda mba hahay hitsako ary soa lavo mba hahay hamindra » !
Vaut mieux tard que jamais ??? Niaiky hono ianao r’Ingahy Rakotoarivelo tao Bel Air, fa tena tsy izy ARY NAMITAKA’ANAO ry Raharinaivo sy ny tariny (maromaro ihany zy zareo, ary misy aza tena eo akaikinao) ; mino ny rehetra fa hiova famindra ianao, mba tsy hilazan’ny rehetra fa tena ianao mihintsy no tsy mamokatra sy tompon’antoka atramin’izay !
Tsy raharahinay izay tena diso fanantenàna taminareo, na ianao na ry Raharinaivo, fa ny fantatray aloha dia mbola manohana ny mpanongana izy mianakavy ireo ( ao koa ireo nirotsaka rehetra : Rajemison, Rafalimanana, Fetison), matoa sahy manohatra sy mifanandrina amin-dRamatoa Lalao Ravalomanana Rakotonirainy, izay kandidà-n’ny mpiaro ny ara-dalàna sy tia tanindrazana !!
Fanontaniana farany : Mba rahoviana ny tena tolona manarapenitra ê ?
Miverina kely fa tena adino ity :
« Ny tondrozotra izay nifanarahan’ireo ankolafin-kery politika eto amin’ny firenena aza dia tsy notanterahan’ny fat amin’ny antsipiriany. Ireo izay mety aminy ihany no hampiariny kanefa efa lasa lalàna velona mitondra ny firenena ny tondrozotra »
Efa nisy fanambaràna toa izao ve nalefanareo tany amin’ny ONU, Vondrona eraopeana, UA, SADC, sns…., fanambaràna manazava antsipiriany an’izay tsy mety rehetra ?
Tsy hiverenana eto ny fanekena ankolaka na dia miteraka olana be aza, an’ilay lalam-panorenana fôpla ! Tsy asiana resaka ihany koa ny momban’ny firotsahan’ilay kandidà tena mendrika !
Fifidianana inona no ho vita ao anatin’izao bôrdelina izao ? Mba lasa ihany ny saiko ry zareo !
Lazain’ny Accord de Cotonou fa tsy tokony mitantana sy mikarakara fifidianana ho famerenana ny ara-dalàna izay nanongam-panjakàna ! Inona izao no miseho ???
Ny haino aman-jery (indrindra ireo FANANAM-BAHOAKA) aza atramin’izao tsy azon’ny mpiaro ny ara-dalàna ampiasaina akory !
Zava-dehibe fa niaiky i Kotovelo, EN FIN!!!!
dia miandry fanarenana aza e!!!hanoy sa mbola sady tsy hihira no
tsy hanao tsianjery???hisaorako ny lanitra fa fisaka ny marina ka sarotra tadiavina( fa hita ihany),
nefa ny mampalahelo dia olon-dehibe izy fa tsy zazakely, koa dia FAKOFAKON-DRAHA ery ve no haniliana ny
MAIMBONY( Kotovelo io an ) AMIKO DIA FIALAN-TSINY IHANY IZANY FA TOMPON’ANDRAIKITRA IZY ! ARY
TSY NISY NANERY AZY TOY NY FANERENY AN’I DADA SY NY VAHOAKA HANAIKY FOTSINY! amiko dia VOKY
LERY DIA MITADY HIKOPAKOPAKA. MIALÁ RAHA SAHY ! RAHA TENA LEHILAHY FA AZA MANETSIK’ ELOKA
EO RY KOTOVELO a! MAIMBO IANAO ARY HO TSARAIn’ny TANTARA.
MANINONA RAHA TSORINA FOTSINY FA VOAVIDY IANAO DIA VITA FA TSY MANILIKILIKA ???JODASY!!!!!
Efa ela ny Filoha no nanome aval momba io fanelanelanan’ny FFKM io,izay tokony hitondra any amin’ny fihaonana an-tamponin’izy 4. Ry Benangy & Co no efa zatra tsy manaraka sy manohatra izay tenin’ny Filoha. Izao izany izy milaza ny handray anjara indray. Wait and see !!
Anontanio i Benangy hoe firy ny invitations azony avy any amin’ny FFKM, ary nampahafantariny sy nomeny ny olon’ny movansa ve izany ??
Précédent Article précédent : MAGRO BEHORIRIKA : Ampodio alohan’ny fifidianana Dada
Suivant Article suivant : FIKAMBANANA VERY ASA : MISAONA NY ASA ETO MADAGASIKARA